Yohimbe kuhukura mushoma - J & S Botanics
[Latin Name] Corynante Yohimbe [Plant Source] Yohimbe nemakwati inounganidzwa kubva Africa [Magadzirirwo] Yohimbine 8% (HPLC) [Chitarisiko] Red Brown Fine Powder [PARTICIPLE saizi] 80 Mesh [Kurasikirwa iri kuomesa] 5.0% [Heavy Metal] 10PPM [ wabvisa zvokufembedzwa] panyaya iyi [Storage] Store kuchitonhora & yakaoma nharaunda, chengeta kubva zvakananga chiedza nokudziya. [Package] dzaizara pepa-ngoma maviri mupurasitiki-mumasaga mukati. Net uremu: 25kgs / dhiramu [chii yohimbe] Yohimbe muti kuti inokura muAfrica, uye zvizvarwa zvemo ikoko vane ...
Min.Order Kuwanda: 100 Madzimabo
[Plant Source] Yohimbe nemakwati inounganidzwa kubva Africa
[Magadzirirwo] Yohimbine 8% (HPLC)
[Loss iri kuomesa] 5.0%
[Wabvisa zvokufembedzwa] panyaya iyi
[Package] dzaizara pepa-ngoma maviri mupurasitiki-mumasaga mukati. Net uremu: 25kgs / dhiramu
Yohimbe muti kuti inokura muAfrica, uye zvizvarwa zvemo ikoko vakashandisa ichakasangana nezvimwewo uye nemakwati Yakanatswa remubatanidzwa kuwedzera chido chokurara uye unongotaura. Yohimbe rave kushandiswa emakore sechinhu aphrodisiac. It rakabatanidzwa aisvuta somunhu hallucinogen. Mazuvano, Yohimbe nemakwati mushoma iri kunyanya kushandiswa kurapa kusabetsera varume nevakadzi.
Kana anwa, Yohimbe ari anyatsopinda ropa rukova, uye Yohimbe kuti inofadza Migumisiro zvinobva ayo kukwanisa kuwedzera ropa riyerere kuti sikarudzi - uye ichi rinoshanda kune vose varume women.Aside kubva ayo aphrodisiac zvinokonzerwa, tsvakurudzo itsva dzinoratidzawo kuti Yohimbe ane simba antioxidant migumisiro.
Yohimbe Bark wabvisa Benefits £ º
1.It Ndicho chinhu aphrodisiac kuti varume nevakadzi
2.Be kushandiswa kurwisa kusabetsera
3.It kunoratidzwa kuva antioxidant simba
4.It kunobatsirawo kurambidza arteries kubva kutanga tsinga
5.It kunotibatsira pabonde chaitwa, kuwedzera libido
6.Ithas zvakare kwaratidzwa kubatsira kudzivirira mwoyo kurwiswa
Previous: Wolfberry wabvisa
Yavaibvisa mhangura chlorophyllin